Parlemanta ao Georgia - Wikipedia
Endrika:Infobox legislatureNy Parlemanta ao Georgia (zeorzianaEndrika:Lang-ka, sakartvelos p'arlament'i) dia ny tampony mpanao lalàna ao Zeorzia. Izany no unicameral ary manana mpikambana 150, fantatra amin'ny maha - solombavambahoaka, izay 77 mpikambana dia mitanila solontena sy ny 73 dia voafidy amin'ny alalan'ny tokan-tena-mpikambana ao amin'ny distrikan'i fahamaroana rafitra, misolo tena ny fari-pifidianana. Ireo mpikambana rehetra ao ao amin'ny Antenimiera dia voafidy ho an'ny efatra taona eo amin'ny fototry ny olombelona rehetra vahoaka. Nanomboka ny Mey 2012 ny Parlemanta, nihaona tamin'ny vaovao Tranoben'ny Parlemanta tao Kutaisi.
Ny lalàm-Panorenana Georgia atolotry ny Parlemanta Georgia foibe fahefana mpanao lalàna, izay voafetra ny Parlemanta ny repoblika mahaleotena ny Adjara sy Abkhazia.
3 Fandaniana ny Volavolan-dalàna ao amin'ny Parlemanta
4 Vaovao tranoben'ny parlemanta tao Kutaisi
5 Ny mpikambana
6 Jereo koa ny
7 Andinin-tsoratra masina
Taloha tranoben'ny parlemanta tao Tbilisi
Ny hevitra mametra ny mpanjaka hery sy ny famoronana ny parlemantera-karazana tena ny governemanta dia nitoe-jaza eo amin'ny aristocrats sy ny olom-pirenena ao amin'ny taonjato faha-12 Fanjakan 'i Georgia, nandritra ny fitondran' ny Mpanjakavavy Tamar, ny voalohany zeorziana vehivavy mpanjaka.Endrika:Category handler/numbered
Ao amin'ny fomba fijery ny Mpanjakavavy Tamar ny mpanohitra sy ny mpitondra, Qutlu Arslan (zeorziana Simona de Montfort), ny voalohany zeorziana Parlemanta dia azo niforona ny roa "efi-trano": a) Darbazi – na ny fiangonana, dia ny aristocrats ary nanan-kery ny olom-pirenena izay te-hihaona avy ny fotoana ny fotoana mba handray fanapahan-kevitra eo amin'ny dingana mitranga ao amin'ny firenena, ny fampiharana ireo fanapahan-kevitra devolving ny mpanjaka b) Karavi – tena maharitra ny fivoriana eo amin'ny fivorian ' ny Darbazi. Ny fifandonana nifarana tao amin ' ny fandresena ny mpanohana ny tsy manam-petra ny mpanjaka fahefana. Qutlu Arslan dia nosamborina tamin'ny vadin'ny Mpanjaka, ny filaminana.Endrika:Category handler/numbered
Taty aoriana, dia nisy afa-tsy ao 1906 fa ny Georgians nahafahan'ireo ny fahafahana mandefa ny solontenany ny Antenimiera tena ny Governemanta, ny Faharoa Duma (avy 1801 Georgia efa nampidirina ao amin'ny Fanjakana rosiana). Zeorziana solombavambahoaka amin'ny Duma teo Noa Zhordania (taty aoriana ny Filoha tsy miankina Georgia ao 1918-21), Ilia Chavchavadze (mpanorina ny zeorziana National Movement), Irakli Tsereteli (mpitarika ny Social-Democratic Vondrona ao amin'ny Faharoa Duma, taty aoriana Minisitry ny Atitany ao Rosia ny Governemanta vonjy maika), Karlo Chkheidze (mpitarika ny Menshevik Vondrona ao amin'ny Fahefatra Duma, Filohan'ny voalohany fampiantsoana ny Foibe Komity Mpanatanteraka ny Rehetra-rosiana ny Mpiasa sy ny Miaramila' ireo solombavam-bahoaka tamin'ny 1917, ary Mpitari-draharaha ny Trans-Caucasian Seym tamin'ny 1918), sy ny hafa.
Tamin'ny 1918 voalohany zeorziana antenimieram-Pirenena, dia nanorina ny efa mahaleo tena i Georgia. Tamin'ny taona 1921 ny Antenimiera nandray ny voalohany lalam-Panorenana zeorziana. Na izany aza, fotoana fohy taorian'ny fananganana ny lalàm-Panorenana, Zeorzia no nipetrahan'ny ny tsipalotra ny bolshevik Tafika Mena. Io dia narahan'ny iray banga ny 69 taona ao amin'ny Parlemantera Governemanta zeorziana tantara. Ny fanorenana ny tranoben'ny parlemanta nanomboka tamin'ny taona 1938, ary vita tamin'ny 1953, rehefa Georgia dia mbola ao anatin'ny Firaisana Sovietika. Izany dia natao nataon'ny mpanao mari-trano Victor Kokorin sy Giorgi Lezhava.
Ny voalohany multiparty Fifidianana tao amin'ny Firaisana Sovietika no natao tany Georgia ny 28 oktobra 1990. Voafidy Faratampony Sovietika (ny anaran ' ny fanandramana sy ny pseudo-ny Parlemanta tao amin'ny Firaisana Sovietika teo aloha) nanambara ny fahaleovantena ny Zeorzia. Tamin'ny 26 Mey 1991 Georgia ny vahoaka voafidy ny Filohan'ny Filan-kevitra Ambonin'ny Zviad Gamsakhurdia amin'ny maha Filoha ny firenena.
Ny fihenjanana eo amin'ny fitondrana sy ny antoko mpanohitra nihamafy tsikelikely, izay amin'ny 1991-92 mandroso ho amin'ny ady mitam-piadiana. Ny Filoha sisa ny firenena, ny Faratampony Sovietika nitsahatra ny asa sy ny hery dia raisina eo amin'ny Filankevitry ny Miaramila.
Tamin'ny 1992, teo aloha ny Minisitry ny Raharaham-Bahiny ny Firaisana Sovietika Eduard Shevardnadze dia niverina tany Zeorzia, mihevitra ho manana ho Chairmanship ny Filankevitry ny Miaramila izay reconstituted ho ny Fanjakana ny Fiarovana ny Filan-kevitra. Ny Filankevi-Panjakana naverina tamin'ny laoniny Georgia ny lalàm-Panorenana ny 1921, nanambara 4 aogositra 1992 toy ny andro ny fifidianana parlemantera.
Tamin'ny 1995, vao voafidy ao amin'ny Antenimiera nandray ny lalàm-Panorenana vaovao. Georgia ankehitriny manana semi-filoham-pirenena rafitra amin'ny unicameral parlemanta. Tamin'ny taona 2011 Mikheil Saakashvili ny filohan'ny Georgia nanao sonia ny fanitsiana ny lalampanorenana izay misy ny antenimiera ao amin'ny faritra andrefan'i tanànan'i Kutaisi.Endrika:Category handler/numbered
Tamin'ny 26 Mey 2012, Saakashvili notokanana ny vaovao tranoben'ny Parlemanta tao Kutaisi. Izany dia atao ao anatin'ny ezaka decentralise hery sy ny fiovana ara-politika sasany fanaraha-maso akaiky kokoa ao Abkhazia, na dia voatsikera ho marginalising ny mpanao lalàna, ary koa ho amin'ny fandravàna ny Sovietika Ady Fahatsiarovana teo aloha tao amin'ny trano vaovao ny toerana.
Zeorziana Parlemanta dia ny Faratampon'ny firenena ny solontenan'ny vatana izay vokatry ny lalàna, ny fahefana, ny mamaritra ny tena lalana ao amin'ny firenena an-trano sy ny politika ivelany, ny fanaraha-maso ny asan'ny Governemanta tao anatin'ny fetra voafaritry ny lalàm-Panorenana sy ny fanazaran-tena hafa dia zony.
Andininy faha-4 ny Constition, na izany aza, dia mitaky fa ny fanarahana ny fananganana ny vatantsika ny toerana tena ny governemanta manerana ny faritany manontolo ny Georgia (Anisan'izany ny ao Abkhazia sy Ossetia Atsimo, amin'izao fotoana nipetrahan'ny Rosia), ny Parlemanta ho lasa bicameral mpanao lalàna, ahitana ny Filan-kevitry ny Repoblika araka ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieran-Doholona toy ny antenimieran-doholona.
Ny Parlemanta dia tarihan'i ny mpandaha-teny. Zurab Zhvania natao ny lahatsoratra ny mpandaha-teny avy amin'ny novambra 1995 izy mandra-notapahiny dia ny Filoha Eduard Shevardnadze ary nametra-pialàna avy amin'ny lahatsoratra ao amin'ny 1 novambra 2001. Tamin'ny akaiky ny "marathon" fivoriana, Nino Burjanadze dia voafidy ho filoha tamin'ny novambra 10, 2001. Izy no mpandaha-teny mandra-ny solombavambahoaka voafidy tamin'ny taona 2008 nampiantso, araka ny efa voafidy tsy mba mihazakazaka amin'ny 2008 ny fifidianana parlemantera. Davit i Bakradze, izay nankany amin'ny antoko Hetsika Nasionaly ny antoko lisitra ao amin'ny 2008 ny fifidianana parlemantera, dia voafidy ho Filoha tamin'ny taona 2008 parlemanta. Taorian'ny 2016 ny fifidianana parlemantera, David Usupashvili dia nosoloina Irakli Kobakhidze.
Fandaniana ny Volavolan-dalàna ao amin'ny ParlemantaHanova
Araka ny lalàm-Panorenana, Solombavambahoaka, komity, ny Solombavambahoaka vondrona, ny mpikambana iray ao amin'ny parlemanta, ny faratampony ny solontenan'ny vatana Abkhazia sy Ajaria, na tsy latsaky ny 30 000 ny mpifidy dia manana zo hanao lalàna.
Parlemantera ny komity ary ny Filoha dia ny lohan ' ny tompon-kevitra ny lalàna tolo-kevitra any Zeorzia . Ny volavolan-dalàna, efa voaomana ao amin'ny komity na voaray amin'ny alalan'ny volavolan-dalàna ity, dia resahina ao amin'ny fihaonambe iray manan-danja ny komity. Ny volavolan-dalàna, miaraka amin'ny fomba fijery ny komity na ny fanazavana taratasy mifatotra, dia nandroso tamin'ny hafa Parlemantera komity sy ny sampana. Dia nivoaka tao amin'ny "Antenimiera ny Tatitra", ny olana manokana ny Antenimiera.
Talohan'ny ny komity dia manapa-kevitra ny hanolotra ny volavolan-dalàna ny fivoriana dia nandamina ny komity ny famakiana. Ny famakiana dia natao imasom-bahoaka. Vaovao momba ny komity ny famakiana dia naparitaka tamin'ny alalan'ny haino aman-jery ny Solombavambahoaka ny asa fanaovan-Gazety-Center, farafaharatsiny 7 andro mialoha. Raha ny komity dia manapa-kevitra fa ny volavolan-dalàna dia efa vonona ho amin'ny fifanakalozan-kevitra nandritra ny fivoriana fivoriana, dia nandroso ho any amin'ny Mpiasa ao amin'ny Parlemanta. Ny farany dia mahita ny ho azy fa ny volavolan-dalàna mametraka ny fandaharam-potoana ny Birao. Raha ny volavolan-dalàna dia natomboky ny Filoha Zeorzia, ny faratampony ny solontenan'ny vatana Abkhazia sy Ajaria, na amin'ny fari-pifidianana, ny Solombavambahoaka Birao dia manondro ny volavolan-dalàna any amin'ny manan-danja ny komity.
Ny Parlemanta dia mihevitra ny volavolan-dalàna telo vakiteny.
Vakiteny voalohany - Tamin'ny voalohany ny famakiana ny volavolan-ny fitsipika ankapobeny sy ny tena tolo-kevitra no resahina. Raha ny volavolan-mandalo ny vakiteny voalohany, dia alefa any amin'ny manan-danja ny komity (komity), miaraka amin'ny fanamarihana ho raisina.
Faharoa ny famakiana Ny volavolan - nohavaozina ary niresaka amin'ny kaonty ny fanamarihana nataon ' ny Antenimiera - dia atolotra ny trano nandritra ny fivorian'ny Antenimiera ho an'ny faharoa ny famakiana. Ao amin'ny faharoa ny famakiana ny volavolan-dalàna no resahina amin'ny alalan'ny fizarana, toko, fepetra, na faritra fepetra, ny tsirairay ho hatao ny fifidianana.
Fahatelo ny famakiana - ny fahatelo ny famakiana ny mpikambana ao amin'ny Parlemanta dia nanome ny dikan ' ny volavolan. Mety hampiditra ihany no miandraikitra ny fanoratana fanamarihana, taorian'ny izay ny volavolan-dalàna, nolanian'ny Parlemanta, dia atolotra ny Filohan ' i Georgia, izay famantarana izany ho lalàna sy efa namoaka. Ny lalàna no navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny taova, ny miditra an-kery eo amin'ny faha-15 andro amin'ny boky, raha tsy misy teny hafa dia voalaza ao amin'ny lalàna.
Vanim-potoana ny fivoriana
Ny Parlemanta mihaona in-droa isan-taona ny lohataona sy ny fararano fotoam-pivoriana. Ny lohataona fotoam-pitsarana manokatra ny talata voalohany amin'ny volana febroary sy manidy izany tamin'ny zoma farany tamin'ny volana jona. Amin'ny fararano, ny fivoriana manomboka amin'ny talata voalohan'ny volana septambra ary mifarana amin'ny zoma fahatelo ny volana desambra.
Ny trano nandritra ny fivorian'ny Antenimiera dia nomanina ho fortnightly bisikileta, nanao ny fivoriana sy ny komity sittings. Herinandro voalohany dia nomena mba fivoriana fotoam-pivoriana, raha ny faharoa ny komity asa sy ny fivoriana miaraka amin'ny fari-pifidianana.
Vaovao tranoben'ny parlemanta tao KutaisiHanova
Tamin'ny 26 Mey 2012, ny parlemanta vaovao trano dia notokanana tao an-tanànan'i Kutaisi, 231 kilometatra (144Endrika:Convert/kmEndrika:Convert/test/A any Tbilisi, fanoloana ny tranoben'ny Parlemanta tao amin'ny 8 Rustaveli Avenue ao Tbilisi.
Ny governemanta, mandritra ny fanorenana ny fanorenana, dia nampirisika azy io ho toy ny mariky ny ao Zeorzia mamirapiratra, demokratika ho avy. Ny toerana misy azy ao Kutaisi no menatra miseho ho toy ny tosika ny toe-karena any amin'ny faritra dia nisy ihany koa ho toy ny lalana ho raiki-pitia amin'ny firenena akaiky kokoa ny miara-miasa. Ireo mpanakiana milaza fa ny trano dia fandaniam-bola, ary fa manana Parlemanta ao Kutaisi, raha ny sisa ny governemanta mitoetra ao Tbilisi, dia tsy mahomby.
Ny trano miorina amin'ny toerana iray Sovietika izao Tontolo izao ny Ady lehibe II ny fahatsiarovana; ny tsangambato dia nandrava amin'ny baomba tamin'ny volana desambra 2009, ny famonoana olona roa.
Ny trano dia ao ny endriky ny 100-metatra (330Endrika:Convert/mEndrika:Convert/test/A amin'ny 150-metatra (490Endrika:Convert/mEndrika:Convert/test/A boribory somary lavalava miendrika fitaratra dome.
Amin'ny 21 septambra amin'ny taona 2018 dia nanambara fa ny Parlemanta ao Georgia dia hifindra ao Tbilisi hatramin'ny volana janoary taona 2019.
Lisitry ny mpikambana ao amin'ny Parlemanta avy any Georgia, 1990-1992
Lisitry ny mpikambana ao amin'ny Parlemanta avy any Georgia, 1992-1995
Lisitry ny mpikambana ao amin'ny Parlemanta avy any Georgia, 1995-1999
Lisitry ny mpikambana ao amin'ny Parlemanta avy any Georgia, 1999-2003
Lisitry ny mpikambana ao amin'ny Parlemanta avy any Georgia, 2003-2004
Lisitry ny mpikambana ao amin'ny Parlemanta avy any Georgia, taona 2004-2008, nitombo vidy
Lisitry ny mpikambana ao amin'ny Parlemanta avy any Georgia, 2008-2012
Lisitry ny mpikambana ao amin'ny Parlemanta avy any Georgia, 2012-2016
Lisitry ny mpikambana ao amin'ny Parlemanta ny Georgia (current)
- Pirenena Parlemantera trano famakiam-Boky ao Zeorzia
Lisitry ny mpanao lalàna amin'ny firenena
↑ Parliament of Georgia. Parliament’s Building. Retrieved on 2011-04-28.
↑ Bakradze, Nino. A Tale of Two Parliaments (in en).
↑ "Georgia opens new parliament in Kutaisi, far from the capital". Washington Post. 26 May 2012. https://www.washingtonpost.com/national/georgia-opens-new-parliament-in-kutaisi-far-from-the-capital/2012/05/26/gJQAOhOGsU_story.html. Retrieved 26 May 2012.
↑ RFE/RL Newsline, November 13, 2001.
↑ "An expensive folly or an investment in the future?", Economist, June 14, 2012
↑ "Georgia sees glass parliament as symbol of future" June 10, 2012, BBC News
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Parlemanta_ao_Georgia&oldid=958625"
Dernière modification le 1 Desambra 2018, à 09:28